Ramamimampionona Gérard : “Famaliana faty fotsiny ny fifidianana eto amintsika” | NewsMada
Ramamimampionona Gérard : “Famaliana faty fotsiny ny fifidianana eto amintsika”
Efa an-dalana amin’ny fiatrehana fifidianana sahady ny sasany amin’izao. Hanao ahoana? Maneho ny fijeriny ny mpandinika fiainam-pirenena, Ramamimampionona Gérard: “Ny mampatahotra, fifidianana famaliana faty fotsiny ny eto amintsika.” Dinidinika…
Gazety Taratra (*): Ny fahitanao ny lozam-pifamoivoizana niteraka resabe farany teo?
Ramamimampionona Gérard (-): Vaovao lehibe teto iny… Mampalahelo ny fisian’ny faty olona maromaro tato ho ato. Anisan’ny mahatonga izay ny fitaterana: lozam-pifamoivoizana, fisakanan-dalana. Iray amin’izay mahafaty ny Malagasy maro, angamba, izany amin’izao. Noho izany, tokony handraisana andraikitra sy hatao laharam-pahamehana.
Inona no tena mahatonga ny lozam-pifamoivoizana mahafaty olona maro? Teo ny tany Anjozorobe, ny tany Ankazobe. Mila jerena ny tsy fitandremana tao anatin’ireny. Inona ny fisorohana azo atao mba tsy hifanomezan-tsiny, rehefa mipoaka, hoe: angaha tsy nandalo zandary na polisy ireny fony vao niainga? Tsy rehefa mitranga ny loza vao atao ny fanadihadiana. Raha samy nandray ny andraikiny, ka nisy angamba ny fisakanana tany aloha: inoana fa tsy tonga tamin’ireny.
Hakana lesona ireny, fa tsy hoe hadino rehefa kelikely. Toy ny an’ny mpitondra moto, efa be ny matiny: mangorintsina kely; avy eo, hadino. Ahoana no tokony hampahatsiahivana sy hampiharana ny lalàna hifehezana an’ireny? Mba tsy hiteraka faty olona be toy ireny. Tsy avela handalo fotsiny ireny, ka sanatria lasa fisehosehoana kely vetivety. Fa mba lesona hisorohana ny ho avy.
* Ahoana ny amin’ny fitakiana ny fahaleovantenan’ny fitsarana?
– Efa elabe izany resaka fitsarana izany teto. Midradradradra izay manan-draharaha ao. Lasa fitaovana ifampitahorana sy ifanenjehana na ifamotehana ny fitsarana. Manaraka, ao ny tena misy ny kolikoly. Manoloana izany, omena fahafahana ahoana sy hatraiza ny fitsarana? Iza no manery ny fitsarana, ny olona sasany ao fa tsy izy rehetra, hanao kolikoly? Mampatahotra ny ao. Iza na inona no mahatonga ny fitsarana hoe miverina amin’ny ampitso ampitso lava izay manan-draharaha ao?
Raha ny fahaleovantenan’ny fitsarana, samy mandray ny andraikiny fotsiny ny tsirairay ary asiana fandaminana. Raha tena manao ny asany amim-pahamarinana ny fahefana mpampihatra lalàna, tsy irotorotoana be fa atao milamina: inoana fa tsy hisy sahy hitsabaka eo. Mivangongo be ny raharaha ao. Ny any am-ponja, ohatra: be ny tsy voatsara. Misy zavatra maizina be dia be eo, vao mainka hararaotina ilay tsy fahaleovantena.
* Tokony hanana ny fahaleovantena àry ve ny fitsarana?
– Tokony hanana fahaleovantena ny fitsarana eo anatrehan’ny fahefana mpanatanteraka. Tena olana io eto. Mahazo vahana be loatra ny mpanatanteraka, na any amin’ny lalàmpanorenana na aiza. Lasa toe-tsaina ny hoe afa-mibaiko rehefa mpanatanteraka. Tokony hamboarina ihany sa ahoana ny lalàmpanorenana amin’izany?
Manahirana ny hoe ny filoham-pirenena no manana fahefana faratampony. Ahoana no hisian’ny fisaraham-pahefana sy fahaleovantena amin’izany? Tokony hitarika fandraisana andraikitra ny fisaraham-pahefana sy ny fahaleovantena, miampy fahasahiana sy fangaraharana: raha misy mitsabaka, sahy miteny ny tena.
Mahatonga tsy fahaleovantena koa ny herin’ny vola, fa tsy miankina fotsiny amin’ny tsy fahafahana eo anatrehan’ny mpanatanteraka ny tsy fahaleovantenan’ny fitsarana. Lasa vola fotsiny no mibaiko, fa antom-pivelomana ny fahafahan’ny hafa.
* Ahoana ny amin’ny fampihavanam-pirenena?
– Anisan’ny iavahantsika Malagasy io soatoavina iray io: ny fihavanana. Anisan’ny hery goavana be ny hoe fahitana ny tena anton’ny olana mahatonga ny fisarahana. Eo ny zarazarao hanjakana navelan’ny tantara sy ny fanjanahantany. Fa isika Malagasy amin’izao fotoana izao, lasa tena iainana ny ory tsy havan’ny manana. Lasa misy fisarahana be eto: misy tena ory, ao ny tena manana. Eo ny antony ara-tantara, politika…
Ny andraikitry ny fampihavanam-pirenena, mitady ny antony: inona no mahatonga ny fisarahana rehetra eto? Inona avy ny endrik’izany fisarahan’ny Malagasy izany? Iza no tena niady? Fa naninona no niady? Eo ny hampiombonana: hatsaraina raha misy zavatra tokony hohatsaraina ao anatin’izany, miaiky heloka raha misy tokony hiaiky heloka, avela raha misy tokony hifamelana…
* Ary ny amin’ny fifidianana?
– Ny mampatahotra, famaliana faty fotsiny ny fifidianana eto amintsika: hifidy an’ity indray noho ny tsy fitiavana an’iry, ohatra. Mety ho olana izany, tsy mitarika fitoniana sy fivoarana. Mila fitoniana sy fihavanana ny fifidianana. Matoa misy ny hoe ny ory tsy havan’ny manana: na mba samy ory isika, dia mihavana; na samy manana, dia mihavana. Vahaolana izay. Mba ahoana no hananan’ny Malagasy sakafo, fitafiana, trano… ? Eo koa ny fahafahana mitsabo tena, mampiana-janaka… Mampihavana izay rehefa mba samy manana.
Mariky ny fihavanana koa ny fahendrena malagasy amin’ny fahadisoana hoe tsy hanindroa, tsy hanintelo. Mamela heloka ny olona, rehefa mba diso ny tena. Ny rariny itompoana, mody ho heloka; ny heloka ibabohana, mody ho rariny. Mba inona koa ny fahendrena hitaizana ny olona handala an’izany? Mila arovana izay mba tsy hiverimberina ny fisarahana sy ny ady. Ho lasa asa eto hatrany ve ny fampihavanana?
* Amin’ny fomba ahoana?
– Mba tokony hisy fahatsarana hatrany ny tsirairay sy ny besinimaro ary ny rafitra. Efa tsara ny tsirairay, ka lasa tsara ao amin’ny besinimaro sy ny rafitra. Indraindray, misy rafitra foromporonina hanakanana na hamotehan-javatra, hamonoana afo… Manahirana izany.
Enga anie ho rafitra iray tena hoenti-mampiainga ny firenena ho amin’izay fahatsarana izay ny fampihavanam-pirenena.
Tena mba manana ny fahamalinana isika amin’izany: sao manimba zavatra, ohatra, izay atao? Eo koa fahamarinana ny fahamasinana: fahamasinana amin’ny maha kristianina, fa misy ny hoe hasina amin’ny Malagasy. Mba olona manan-kasina ihany ny tena: mifanaraka amin’izay hasina izay ve ny atao mba hampandrosoana ny firenena?